Bilaogy Nizeriana 2005: Fiaramanidina, rafi-pampianarana, fombam-pivavahana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Jona 2019 4:22 GMT
Na izany aza, mitaky mihoatra noho izany ny fanavaozana ny sehatry ny fisidinana, ary mila hitarina any amin'ny fitantanana ny zotram-piaramanidina, ny fiarovana, ny fiofanana araka ny tokony ho izy sy ara-potoana ho an'ny mpanamory fiaramanidina sy ny ekipan'ny fanamoriana, seranam-piaramanidina miaraka amin'ny fotodrafitrasa mandeha sy mpiasa tsara hofana. Tsy vita ao anatin'ny iray andro, na volana vitsivitsy izany. Mila fotoana izany. Tokony halalahana eo an-toerana ny tsenan'ny zotram-piaramanidina anatiny. Tokony hanana fahalalahana hisidina eny amin'izay tiany ny zotram-piaramanidina, ary rehefa tsy mahomby amin'ny fandraharahana ny toerana haleha, dia tsy tokony terena hankany ny zotram-piaramanidina.
“Built for eggheads manned by morons”Grandiose Parlour's kosa mifantoka amin'ny rafi-panabeazana ao Nizeria – zavatra izay tsy mitsahatra mihen-danja hatramin'ny nahazoana ny fahaleovantena.
Tsy mila mpahay siansa momba ny balafomanga vao hahafantatra fa tsy mandroso ny rafi-pampianarana Nizeriana. Tsy nisy vokany ny firotsahana an-tsehatra taloha, ary tsy nampiseho famantarana mahabe-fanantenana hatramin'izao ny fanandramana ankehitriny (raha misy) hamelona indray ny rafitra sy hampiditra aim-bao ao anatin'izany.
Fandinihan'ny Musings of a Naijaman momba ny krismasy any Nizeria
… misy sakafo ihany koa, saingy akoho na osilahy sy vary ary moimoi miaraka amin'ny dodo sy salady – salady nizeriana mazava ho azy, tsy misy zavatra toy ny ravina zava-manitra omena anao aty rehefa mangataka salady ianao. Miresaka trondro am-bifotsy (sardine), henan'omby, atody masaka sy tsaramaso – ankoatra ireo lazaina mahazatra – salady, karaoty, laisoa, voatabia sy tongolobe, afangaro miaraka amin'ny lakiremy salady ….. tsy tena ilay ao an-tsain'ny mpahay momba ny sakafo rehefa manoro-hevitra momba ny salady ara-pahasalamana izy…..
Any Angletera? “Mihinana sy misotro koa ny olona rehetra, miezaka ny hafana hatrany”!
Tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo, nanatontosa ny Fihaonambe momba ny Aterineto 2005 i Nizeria. Gbenga Sesun manome tatitra antsipirihany momba ilay fihaonambe, ny tanora sy ny TIC no tena nifantohana.
Chris Uwaje no manaraka, ary niresaka momba ny filàna ho an'ny tanora Nizeriana mba ho lasa afa-mifaninana maneran-tany. Niresaka momba ny filàna ho an'ny tanora mba hifidy ny hifantoka anaty paikady izy – miaraka amin'ny ohatra hifidy sehatra iray ho hay manokana ao amin'ny tontolon'ny teknolojiam-baovao ary mifantoka amin'izany ao anatin'ny 24 volana. Niresaka mikasika ny filàna mpitari-dalana sahaza ihany koa izy, ary milaza fa tsy maintsy mianatra ny tontolon'ny teknolojiam-baovao amin'ny zokiolona ny tanora Nizeriana.
Kayode ao amin'ny Kazey's Journal manoratra momba ny fivavahana ao Nizeria izay nolazainy fa lasa fombam-pivavahana.
Ny finoana ao Nizeria, na izany Miozolomana na Kristiana, dia ampiharina ao anatin'ny fomba mampatahotra, ary heveriko fa mety ho fandrahonana ny ho avin'ny fandrosoana sy ny fandriampahalemana ary ny firindrana Nizeriana.
Maneho ny heviny momba ireo fivavahana isan-karazany mifanditra ho ambony indrindra izy, ary amin'ny tranga sasany, na dia ao amin'ny fivavahana iray ihany aza, dia mifaninana sy mifanameloka ary samy maka fomba fiteny amin'ny afisy ireo vondrona samihafa
Isaorana Andriamanitra fa amin'ny finoako, azo antoka ho any an-danitra aho, fa tsy amin'ny asako fa amin'ny asa izay ametrahako ny finoako, dia i Kristy Jesosy. Ianao! Tsy misy na inona na inona azontsika atao mba hahatonga antsika ho olo-marina, satria ratsy voajanahary ny olona, fa ny finoako kosa dia mipetraka amin'ilay tsy manam-pahotana sy nitondra ny fahotako talohan'ny nanamboarana ahy sy nahaterahako. Inona koa no azoko angatahana?
Thought Line manambara ny fisokafan’ ny fivarotana lehibe indrindra ao Afrika, Shoprite ao amin'ny toeram-piantsenana lehibe Palms ao Lekki, Lagos, Nizeria. Io no magazay Afrikana Tatsimo faharoa (Game) misokatra tao anatin'ny herinandro!
Teraka avy amin'ny finoan'ireo mpanorina azy ny Game fa nanjary fandaniam-potoana mahasorena sy mankaleo ny fandehanana miantsena ka nieritreritra ny hivarotra antsinjarany ho toy ny kilalao izy ireo ary avy eo niara-nametraka ny tahirin'izy ireo voafetra mba hamadika ny hevitra ho tanteraka amin'ny alalan'ny famoronana tontolo iainana mahafinaritra ho an'ny mpiantsena, izay natrehan'ireo mpiasa manao loko mavokely, lokon'ny vondron'orinasa izay nanjaka hatramin'ny androany.
Manana fanalana andro vaovao sy fanatanjahan-tena mahazatra ankehitriny ny Nizeriana lehibe – dia ny tsenambarotra lehibe – Toa efa faheno!
African Shirts manana hafaliana raha nahare ny fisamborana ilay lehilahy nanao famotsiam-bola – Alamieyeseigha antsoina ihany koa hoe Tina…
Iza no milaza fa levona tsikelikely ny kodiaran'ny fitsarana? Andeha hojerentsika izy raha afa-mandositra ny fonja ao Nizeria, ka manafi-tava toy ny moanina Benedictin miaraka amin'ny nono telo toy ny ao amin'ny Total Recall.
Mety hisy olona hanao sarimihetsika ve? “Nosamborina i Alamaramalamadingdong”